Annaga nagu saabsan - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
HimiladayadaSii wad inaad macaamiisha u abuurto qiimaha ugu sarreeya oo aad siiso shaqaalaha madal ay ku gartaan is-qiimaynta
AragtideenaWaxay go'an tahay inay noqoto alaab-qeybiyaha dharka ugu xirfadda badan uguna tartanka badan isla markaana kor u qaada horumarka waara oo caafimaadka leh ee warshadaha
Qiimahayada: Focus, Innovation, shaqo adag, iskaashi, guul-guul
Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2004. Waa iibiye xirfad leh oo ka samaysan dhar tolsan.Fuzhou Huasheng waxaa ka go'an in ay bixiso tayada sare ee tolnimada dagaal iyo dhar-xidhka wareegyada ee isticmaalayaasha caalamiga ah.
Ka dib markii in ka badan 16 sano ee horumarinta joogtada ah iyo hal-abuurka, Fuzhou Huasheng ayaa dhisay iskaashiga muddada-dheer iyo xasilloon ee istaraatiijiyadeed macaamiisha qiimaha leh ee ka North America, South America, Europe, iyo Koonfur-bari Asia iwm maro tolan iyo maro tolan oo wareeg ah.
Fuzhou Huasheng waxa uu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta ee maryaha mesh-ka ah, tricot-ka, dharka funaanadaha, dharka interlock, dharka jacquard, dharka mélange iyo dhar shaqaynaysa.Waxaan isticmaalnaa alaab tayo sare leh oo dunnida ah waxaana loo rogaa dhar diyaarsan oo dhammaystiran oo dhammaystiran ka dibna loo keeno macaamiisheena qiimaha leh ee adduunka oo dhan.
Hadda, waxaanu haynaa in ka badan 60 mashiino tolida ah waxaana aanu leenahay ilaa 150 shaqaale khibrad leh.Iyada oo rajada cusub ee suuqa ee mustaqbal waara, waxaanu hagaajinnay hababkayada wax soo saarka iyo silsiladaha sahayda.Waxaan nafteena u huray inaan siino qiimaha iyo xalka macaamiisheena.
Dharkayaga waxaa si weyn loogu isticmaalaa meelo badan sida dharka isboortiga, xirashada lebiska, dharka yoga, xirashada caadiga ah, dharka moodada, xirashada qoob ka ciyaarka, nigisyada, dharka dabaasha, dharka hoose, iyo legiriga iwm.
Fuzhou Huasheng wuxuu u hoggaansamaa fikradda ganacsiga ee Tayada waa nolosheenna, Macaamiishana waa kan ugu horreeya.
Si diiran ugu soo dhawoow saaxiibada qaaliga ah ee aduunka dacaladiisa ka kala yimid si ay u soo booqdaan shirkadeena oo ay ugala xaajoodaan ganacsiga.